Ny kaomandy roa farany dia mampiseho ny fahasamihafan'ny fahaiza-manaon'i Ellicott sy ny vokatra - Ellicott Dredges
Didy roa vao haingana dia mampiseho ny fahasamihafan'ny fahaiza-manaon'i Ellicott sy ny tsipika vokatra
KANADA - Mpanamboatra Potash lehibe vao tsy ela no nanome fifanarahana tamin'i Ellicott hanomezana dredge bucketwheel vita amin'ny fanao am-pahefana, herinaratra, vy tsy misy fangarony izay mirakitra ny haitao mandroso ho an'ny rafitra fanaraha-maso, fandidiana ary herinaratra. Ny vatan-drakitra, ny tokotanin-tsambo, ny tohatra ary ireo zavatra hafa amin'ny rafitra dia haorina amin'ny 316 Stainless Steel. Ankoatr'izay, ny dredge dia natao ho an'ny fandidiana mandritra ny taona amin'ny maripana manomboka amin'ny -29 ° F (-34 ° C) ka hatramin'ny 95 ° F (35 ° C).
Representative 3D an'ny Custom B590E Wheel Dragon ™ Dredge
Ny dredge B590E vaovao dia mampifangaro ireto endri-javatra manaraka ireto, ao anatin'izany ny fanaingoana mifototra amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana:
Mpihady kodiarana kambana roa an'ny Ellicott 100 HP (DWE-60).
Motera elektrika 500 HP (372 kW) sy motera herinaratra 250 HP (186 kW).
Rafitra manokana, rafitra elektrika sy hydraulic mifantoka amin'ny fanatsarana ny fahamendrehana ary mifantoka amin'ny fiarovana.
Rafitra fanaraha-maso mifangaro amin'ny RTK GPS.
UPS sy Transfer switch ho an'ny hery famahanana maharitra sy maharitra ho an'ny rafitra manan-danja.
OHIO, Etazonia - Ny State of Ohio dia nividy Dragon Swinging 460SL hafa® dredge hitazonana ny halaliny ao amin'ny Farihin'i Buckeye. Ny departemanta misahana ny harena voajanahary (ODNR) any Ohio dia efa manana maromaro amin'ireo singa ireo ary faly fa nifidy Ellicott hafa ny fanjakana® dredge.
Ny ODNR dia tena mahazo aina amin'ny fahamendrehana voaporofo sy ny fahatsoran'ny sambo misy azy ireo an'ny 460SL's, ny fanampiana azony avy amin'i Ellicott, ary ny halavan'ny Ellicott-n'izy ireo® dredges marika. Mety, ny dredge vaovao dia hisolo ny iray amin'ireo dredge tranainy indrindra an'ny ODNR, ny "Buckeye", izay nanomboka tamin'ny 1965.
Sarin'ny Fanjohian-tany “BUCKEYE” 1960 taona an'ny fanjakana efa antitra an'ny Ohio's 10 "Ellicott Swinging Ladder Dredge miaraka amin'ny sarin'ny solontenan'ny New Custom Ellicott 460SL Dredge voafantina ho an'ny ODNR
Ilay fampiasa 12 "460SL vaovao" custom "dia misy 540 HP (402 kW) keel cooled maotera, 50 HP (37 kW) cutter, tanky fanampiny misy sisiny, ranon-drivotra biodegradable, 20 ft. Fahafaha-manalalaka lalina indrindra ary safidy hafa isaky ny takian'ny ODNR . Ny dredge 460SL an'i Ellicott dia manome ny fahaizan'ny rehetra miasa ho toy ny dredge tohatra mihetsiketsika ho an'ny fantsona tery na toy ny dredge mahazatra rehefa ilaina ny savony malalaka kokoa hahomby amin'ny famokarana.
Ellicott dia manolotra andalana feno an'ny dredges suction fanapahana azo entina ary paompy booster avy amin'ny toerana roa misy anay: Birao lehibe sy birao mpanatanteraka any Baltimore, Maryland, ary orinasa faharoa any New Richmond, Wisconsin, Etazonia.
Ho fampahalalana bebe kokoa, mifandray sales@dredge.com.